Ntụziaka kachasị mma Thermomix Christmas iji mee ezumike ndị a | Usoro ọgwụgwọ
Ntụziaka kachasị mma Thermomix Christmas iji mee ezumike ndị a
Irene Arcas | | Navidad, Thermomix Ezi ntụziaka
Ekeresimesi na-abiaru nso ma anyi n’ile na-eche maka menus ekeresimesi anyi ga akwado n’afọ a Ọtụtụ n’ime unu na-arịọ anyị ka anyị nye anyị ọtụtụ akwụkwọ nri ọdịnala na ndị ọzọ maka ndị ọhụrụ. Ya mere, anyi edeela ederede a na Top 10 nke usoro nri ekeresimesi kacha aga nke oma na blog.
Anyị nwere olile anya na ị masịrị ha! Mana ihe anyị ji n’aka bụ na ha ga-enye gị ụfọdụ ezigbo echiche ijuanya ma mee ndị ezinụlọ gị obi ụtọ.
MERRY CHRISTMAS FRIENDS NA EKELE M FOR LI N'OGE ỌZỌ MERE Anyị !!
1 Chọkoletị dị ọkụ
2 Ekeresimesi log
4 Ackụ ara na ezi abụọ
5 Cannelloni na anụ na pate
6 Hook ke cava
7 Erimeri ofe
8 Salad Christmas na prawn
9 Bourguignon cheeks
10 Polvorones ogbo achicha
Chọkoletị dị ọkụ
Kwa ekeresimesi ọ na-aghọkwu ọdịnala iji nwee ezigbo chocolate na-amalite n’ụbọchị mbụ n’afọ. Soro ya baa ọgaranya roscón de reyes, a Panettone ma ọ bụ ụfọdụ Churros ọ ga-abụkwa ihe ngosi.
A nnọọ mbụ na ndị ọzọ mara mma Ntụziaka maka Christmas ememe. Ọ ga-achọ tebụl gị mma, Ọ ga-abụ eze dessers na ụmụ ntakịrị ga-ahụ ya n'anya enwe a ụtọ ụtọ. A mara mma mere eji megharịa ọnụ.
Jiri ekpomeekpo na nlekọta nke ihe nile. Ntụziaka dị ogologo ma dị mfe na nsonaazụ dị egwu. Are na-aga ada na ịhụnanya na nke a omenala Christmas ụtọ, n'ihi na ya ekpomeekpo na udidi.
Ackụ ara na ezi abụọ
Ntụziaka dị ịtụnanya maka obi ndị ọbịa anyị nri dị ụtọ mana ọ dị mfe. Anyị ga-eji ohere ahụ mee nri ugboro abụọ: nke mbụ anyị ga-esi ya n’akpa achicha ma, emesịa, anyị ga-eji gratin na-atọ ụtọ n’ime oven mechaa ya. Ntụziaka zuru oke ị nwere ike ịkwadebe tupu oge eruo.
Cannelloni na anụ na pate
Omuma na nri ekeresimesi, ezigbo obi uto. Cannelloni ndị a nwere anụ na pate anaghị eme eme. Ọsọ ma dịkwa mfe, yana ekpomeekpo dị egwuY’oburu n’achoghi inwe ihe mgbagwoju anya n’ime otutu ihe esi esi na kichin, n’enweghi obi abua, nka bu nri gi.
Hook ke cava
Ntụziaka a maka hake na cava bụ nri dị ụtọ, zuru oke maka ezumike dịka likebọchị Krismas ma ọ bụ maka oriri ọ bụla ma ọ bụ mgbede pụrụ iche na ndị ọbịa. Ọ bụ ọkụ ma dị mfe ịme nriAgbanyeghị, ụtọ cava pụrụ iche ya na-eme ka ọ dị mma ịtụgharị ya na nri pụrụ iche.
Omuma di iche iche nke ekeresimesi, ihe uto ma dikwa nma. Iji bido ọnụ gị na nri dị ụtọ nke anyị ga - etinye na nchịkọta nhọrọ ekeresimesi anyị. Nri ofe a na-eri na-aga nke ọma. Ihe jupụtara na ekpomeekpo, nuances na textures dị iche iche, ọ bụ nri 10.
Salad Christmas na prawn
Ntụziaka dị ịtụnanya iji chee dị ka onye mbido. Anyị ga-enye dị iche iche pụrụ iche aka a salad Russia soro ya na prawn na ụfọdụ uhie uhie nke ga-enye ya aka pụrụ iche nke ọdịiche. Ntụziaka dị mfe, nke anyị nwere ike ịkwadebe tupu oge eruo na nke ahụ, n’enweghị obi abụọ ọ bụla, ga-enwe ihe ịga nke ọma e ji n’aka.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga nke ọma n’oge ekeresimesi a, cheeks ndị a bourguignon ga-eme ka ọ dịrị gị mfe. E wezụga ịbụ ndị pụrụ iche, ha dị mfe nke na ha ga-eju gị anya. Nri anụ ị nwere ike ije dị ka isi nke ekeresimesi a na nke agaghị ahapụ onye ọ bụla.
Polvorones ogbo achicha
Had nwerelarị polvorones Krismas fọdụrụnụ? Kwadebe achicha a na-eju anya iji uru nke Christmas. Ga-ahụ ụdị ọmarịcha na ịchọ nlezianya ọ nwere. Ọ dịkwa mma iji tii ma ọ bụ kọfị rie nri ụtụtụ ma ọ bụ nri.
Chọpụta ntụziaka ndị ọzọ nke: Navidad, Thermomix Ezi ntụziaka
Pathzọ zuru ezu na edemede: Thermorecetas » Isiokwu » Ntụziaka pụrụ iche » Navidad » Ntụziaka kachasị mma Thermomix Christmas iji mee ezumike ndị a
9 desserts ngwa ngwa maka taa (ekeresimesi)
10 anụ ntụziaka maka ememme ekeresimesi